Oovimba beeNethiwekhi zoMbane
Udidi: Network Lightning
Isikhokelo seNtshayelelo kwiNethiwekhi yoMbane: Yonke into ekufuneka uyazi
25 Agasti 2021 | Ukuhlaziywa: 25 Agasti 2021
Ukuba unemibuzo malunga nehyper ejikeleze iNethiwekhi yoMbane okanye yintoni eyenzayo, jonga phambili kuba eli nqaku liza kubeka inkxalabo yakho ekuphumleni.
I-Bitcoin (BTC) yayiyilwe njengesixazululo sokuhlawula oontanga. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency ebekiweyo sele ikhulile ukuba ibe yindlela ethembekileyo yokutshintshiselana ngexabiso ngaphandle kokubandakanya amaziko aphakathi. Nangona i-Bitcoin ibonelela ngamatyala amaninzi okusetyenziswa, ihlala ikhathazwa kukubuyela umva okukhulu; Ukonakala.
Le ngxaki ibangele inkxalabo kwindawo ye-cryptocurrency ukusukela kwiintsuku zokuqala zeBitcoin. Ngelixa izisombululo ezininzi ziye zavezwa kule minyaka idlulileyo, esinye sezona zixhobo zibalaseleyo zeBitcoin zokukhulisa amandla yiNethiwekhi yoMbane (LN).
Kweli nqaku, sivavanya ukuba yintoni iNethiwekhi yoMbane, izibonelelo kunye nokusilela, kunye nokuba ingawusombulula njani umba wokungazinzi okwenzeka kwi-cryptocurrency ebekiweyo.
Ngaphambi kokuba singene kwi-ins kunye nokuphuma kwe-LN, makhe siqwalasele ngokukhawuleza ingxaki ye-scalability kwaye kutheni kubalulekile kwinkqubela phambili yeBitcoin. Uthungelwano lweBitcoin lunamandla aphantsi okuphuma kwaye lunokuqhuba kuphela ukuthengiselana ezisixhenxe ngomzuzwana ngokugqibeleleyo. Oko kwathiwa, kwimeko apho abasebenzisi abangaphezulu kwesixhenxe bezama ukuthumela imali ngaxeshanye, abo banikezela ngeefizi zenethiwekhi eziphezulu baya kubona ukuthengiselana kwabo kuqala.
Oku kunokuba yingxaki xa abasebenzisi kuthungelwano lwespike ngokubonakalayo ngathi ngexesha lokubaleka kwenkunzi ngo-2017. Kwincopho yayo, iifizi zenethiwekhi zigqithile kwi- $ 55 ngentengiselwano nganye. Le yingxaki yokungaxakeki ejongene nenethiwekhi yeBitcoin.
Yintoni inethiwekhi yombane?
Inethiwekhi yombane, ecetywayo nguThaddeus Dryja noJoseph Poon ngo-2015, isebenza njengomaleko wesibini (umaleko 2) kuthungelwano lweBitcoin, ngenjongo yokusombulula iingxaki ezinxulumene nokusilela. Eyona njongo iphambili ye-LN kukubonelela ngesisombululo esingapheliyo sokwenza i-microtransaction kwinethiwekhi ye-BTC, ekufuneka iququzelele ukuthengiselana ngesantya sombane ngaphandle kwenani labasebenzisi abaqhuba imicimbi ngexesha elinye.
Sebenzisa i-LN, abasebenzisi kufuneka baqale bavule i-off-Chain channel, benze iidiphozithi ze-BTC, kwaye benze intengiselwano ngelixa behlawula iifizi zomzuzu bade bathathe isigqibo ngokubaluleka kweshaneli. Nje ukuba umsebenzi ugqitywe, umsebenzisi angalivala ijelo kwaye athumele imali eseleyo kwinethiwekhi engundoqo yokuqinisekisa kwintengiselwano enye.
Isebenza njani iNethiwekhi yoMbane?
Ukuchaza ukuba isebenza njani i-LN, makhe sijonge isifaniso ukubeka inkqubo yokusebenza kwimeko. UJack unendawo yokutyela, kwaye uJill uyakuthanda ukutya kule restyu. UJill ukulungele ukutya apho yonke imihla enemeko ayihlawula kwiBitcoin. Nangona kunjalo, xa ujonga indlela ezihlawula ngayo kwaye zibiza imali eninzi inethiwekhi, uJack noJill, bayavuma ukusebenzisa ijelo elivulekileyo phakathi kwamaqela omabini kwiNethiwekhi yoMbane.
Emva kokuba eli jelo lenziwe, idilesi eyahlukileyo ye-BTC eyalela ukuthengiselana kwesi sitishi iyavela. Ngoku, uJill ufaka i-BTC kule dilesi ukuqinisekisa ukubakho kwentlawulo ngalo lonke ixesha. Idiphozithi iyenza isebenze indlela yejelo. Nanini na xa uJill esidla kwindawo yokutyela kaJack, ukuthengiselana kuyarekhodwa kwisitishi, okuququzelela ukuhlawulwa kwangoko ngentlawulo encinci.
Ukuba omabini la maqela agqibe ekubeni ayiphelise intsebenziswano yabo nangasiphi na isizathu, banokuvala isitishi. Ekuvalweni komjelo, yonke imicimbi eqhubayo iyashwankathelwa kwaye ihanjiswe kwikhonkco eliphambili kwintengiselwano enye. Oku kunciphisa ngokumangalisayo imali yentengiselwano kwinethiwekhi, xa kuthelekiswa nokuhlawula iifizi zenethiwekhi kuyo yonke into oyenzileyo.
Iinkonzo kunye neengozi zomnatha wombane
Njengakwizinto ezininzi ezenziweyo ngabantu, iNethiwekhi yoMbane ibonelela ngezibonelelo ezifanelekileyo kunye nokwehla kokusebenza. Uluhlu olungezantsi zimbalwa zazo:
Intlawulo yokuSebenza ephantsi
Imirhumo yentengiselwano kwi-LN liqhezu lemirhumo ebizwayo kwi-mainnet kuthengiselwano olunye. Intlawulo yenethiwekhi iphela ihlawulwa kuphela xa kuvalwa ijelo. o
I-LN ivumela abasebenzisi ukuba baququzelele ukuthengiselana ngesantya sombane ngaphandle kwenani labasebenzisi abasebenza kwinethiwekhi nangaliphi na ixesha.
Ngokwewebhusayithi ye-LN, itekhnoloji inokuqhuba iibhiliyoni zentengiselwano ngomzuzwana omnye. Umda onjalo kufuneka ubonelele kwinani elihlala likhula labasebenzisi be-BTC ngaphandle kokuyekisa uthungelwano lwe-mainnet nangayiphi na indlela.
Ukuququzelelwa kweeNtengiselwano zoMnqamlezo
I-LN ayikhawulelwanga kwi-Bitcoin okanye nayiphi na imali yedijithali. Itekhnoloji ivumela ukuhanjiswa ngokuthe ngqo kwemali eyahlukeneyo yokwahlula phakathi kwamaqela, ngenxa yokuba imixokelelwane ixhasa umsebenzi ofanayo we-cryptographic hash.
Amaqela kwisiteshi esivulekileyo kwi-LN anokuhambisa kuphela ngaphakathi komda osetiweyo kwinethiwekhi.
I-LN inendawo eninzi yokugubungela umhlaba, ukuba inikwe inani elilinganiselweyo leendawo ezisasazwe kwinethiwekhi.
Ukuhamba ngendlela enzima
Njengoko inethiwekhi iyaqhubeka nokukhula, ukuhamba phakathi kweendawo kuba nzima ngakumbi.
Imingcipheko yokuThengisa ngaphandle kweintanethi
I-LN whitepaper iqaphela ukuba imali ebotshelelwe kwisitishi inokubiwa liqela elinye, ngelixa elinye lingaxhunyiwe kwi-intanethi okanye kude. Nangona kunjalo, amaqela achaphazelekayo angakhuphisana ngobuqhetseba ukuguqula imali ebiweyo. Nangona kunjalo, kukho isithintelo sexesha kumdlalo wokhuphiswano.
Ngaphandle kweziphene ezinokusombuluka ze-LN, itekhnoloji inika isisombululo esingenakuphikiswa kumcimbi wokungazinzi kwishishini le-cryptocurrency (Bitcoin). Kwaye nangona iiprojekthi ezintsha ze-crypto zingenangxaki yokuma, akukho enye imali yedatha enokuthelekiswa nenqanaba lokwamkelwa, ukusetyenziswa kunye nokubaluleka kweBitcoin kwihlabathi ledijithali.
Oko kwathiwa, okoko nje i-Bitcoin ihlala ilungile-enikiweyo- kunye neengxaki zokungazinzi ziyaqhubeka, i-LN ihlala sisixhobo esibalulekileyo sokuququzelela ukuhanjiswa kwenkqubo kwinethiwekhi.
tags BTC, Inethiwekhi yombane yeBitcoin, iindaba